Farany vao misy ventiny izao… | NewsMada
Farany vao misy ventiny izao…
Par Taratra sur 29/12/2018
Taona itsy, itsy ny lalana; taona ity, ity ny lalana, taona iry, iry ny lalana… Amin’ny tonon-taona toy izao, fanao ny manao jery todika: manao ahoana ny lasa hijerena ny hoavy amin’izay hatao anio? Be ny zava-nitranga, sarotra sy mafy, teto ny firenena nandritra ity taona madiva hivalona ity. Farany vao misy ventiny?
Eo aloha ny fiafaran’ny fitondrana Rajaonarimampianina, nametra-pialana mialoha ny fifidianana, araka ny lalàmpanorenana: “Premier tour dia vita” fa tsy tafakatra fihodinana faharoa. Nampikaikaika ny maro ny tsy fandriampahalemana, ny fakana ankeriny, ny kolikoly avo lenta, ny fanjakazakan’ny tsimatimanota…
Farany vao misy ventiny ny fitarainana sy ny hetsika hatramin’izay? Ady fiady sy fitady izay hisian’ny fiovana sy ny fanovana. Nefa tsy vita na lasan’izay ho azy amin’izao ny ratsy rehetra. Mbola eo, ohatra, ny fahantrana sy ny fahasahiranam-bahoaka, ny tsy fahazoana antoka izay havoakan’ny ampitso tsy hita be ihany…
Aiza àry ny lalana na inona ny hatao? Amin’izao faran’ny fe-potoam-piasan’ny fitondrana teo aloha izao ihany koa vao mazava sy hita soritra amin’ny alalan’ny voka-pifidianana ny “Raharaha 2009”, araka ny fijerin’ny sasany azy. Tena nitaky fiovana sy fanovana ve, ohatra, ireo nihetsika tamin’ireny fotoana ireny?
Karazana tsipi-panohizana sampontsampona fotsiny ny fitondrana teo anelanelan’izay? Vokatry ny kisendrasendra ratsy ihany tsinona, nanamarinan-tena ny niononana tsy fidiny fa hoe hamaha olana, kinanjo… Niaraha-nahita ny vokany. Hatramin’izao, mbola ahina fa tsy mahafa-bela tanteraka ny krizy na ny korontana.
Tsy efa mba hita soritra amin’izay ve ny raharaha amin’izao? Fifidianana ny hoe hany hisian’ny fifandimbiasan-toerana milamina sy mazava. Rehefa inona na ahoana ny fifidianana vao hoe azo antoka, eken’ny rehetra, hampilamina, hamarana ny disadisa politika… ? Kibo mitsara tena amin’izay lazainy sy ny ataony ny tsirairay.